कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया रोकियो – Everest Dainik – News from Nepal
कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया रोकियो
काठमाडौं, भदौ ६ । ऐन अभावमा सरकारले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया रोकेको छ । सरकारले हाल संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सो विधयेक पारित नभएसम्म कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि नबढ्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सो विधयेक मन्त्रिपरिषद्बाट संसद्मा लग्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
मन्त्रालयले यसअघि साउनको दोस्रो सातादेखि कर्मचारी समायोजनका प्रक्रिया रोकेको थियो । यसअघि मन्त्रालयले साउन दोस्रो साताबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजना प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको थियो । तर भदौं पहिलो सातासम्म समायोजनका प्रक्रियाको कुनै काम अघि बढेको छैन ।
‘कानुन नै नभएपछि कसरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने ? -मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भन्नुभयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजन हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव देखिएको छ । जसबाट प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा प्रभाव परेको गुनासो प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको छ । आजको नेपाल समाचारपत्रले खबर लेखेको छ ।
ट्याग्स: karmachari, Karmachari samyojan
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन शुरू (लाइभ)
औँठी–आइफोन हातमाः राहतको लाममा !
भारतमा एकैदिन १८ को मृत्यु, संक्रमित संख्या ५ हजार नजिक
सांस्कृतिक सचेतता: आजको आवश्यकता
अत्यावश्यक मेडिकल सामग्रीको स्टक ‘दुई साताका लागि मात्र’, आयातबारे अझै अन्यौल
कोरोनालाई बिदा गर्दै चीन, २४ घण्टामा भएन कसैको मृत्यु
स्वास्थ्यकर्मीलाई पिपिई उपलब्ध गराउन पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, प्रान्तहरुमा पठाइयो ५ लाख N95 मास्क र ५० हजार टेष्ट किट
लकडाउन: आफन्तलाई पनि प्रवेश निषेध, अर्को वडामा जान रोक !